5 Arrimood oo Xasaasi ah SEO ayaa lagu ogaadey Boodhadh | Martech Zone
Weligaa miyaad guurguuratay boggaaga? Waa istiraatiijiyad weyn in lagu xalliyo arrimo qaawan oo qaawan oo ku saabsan bartaada oo laga yaabo inaadan ogaan. Saaxiibbo wanaagsan Istaraatiijiyadda Goobta ayaa naloo sheegay Baahinta Riyaha SEO Spider. Waa guurgure fudud oo bilaash ah oo xaddidan oo ka kooban 500 bog gudaha ah… ku filan inta badan bogagga intarnetka. Haddii aad u baahan tahay wax intaa ka badan, iibso ruqsadda sanadlaha ah ee £ 99!
Runtii waan ku qanacsanahay sida ugu dhakhsaha badan ee aan u baari karo goob oo aan u arko 5-ta arrimood ee muhiimka ah ee Mashiinka Raadinta:
404 Lama helin Arimaha leh xiriiriyeyaal gudaha ah, xiriiriyeyaal dibadda ah iyo sawirro. Tixraac sawirada aan la helin waxay gaabineysaa bartaada. Tixraacida xiriiriyeyaasha gudaha si khaldan ayey u carqaladeyn kartaa booqdayaashaada.
Nuqulada Bogga waa cunsurka ugu muhiimsan ee boggaaga, miyaad ku hagaajisay ereyada muhiimka ah?
Tilmaanta Meta waxaa loo soo bandhigayaa sida sharaxaadda boggagaaga bogagga natiijada mashiinka raadinta (SERPs). Adoo hagaajinaya sharraxaadda 'meta', waxaad si weyn u hagaajin kartaa sicirka guji-ee bogaggaaga.
Cinwaanada - H1 waa cinwaan cinwaan ah waana inaad lahaataa 1 cinwaan dhexe boggiiba. Haddii aad wax intaa ka badan haysato, waxaad u baahan doontaa inaad u weeciso cinwaannada kale. Raxmada oohinta ayaa ku tusi doonta astaamahaaga H2 sidoo kale… inbadan oo kuwa kujira hal bog ah wey fiicantahay. Dhamaan cinwaannada waa inay ahaadaan eray fure u ah kuna habboon mowduuca bogga.
Muuqaalka Alt Tags gacan ka geysato makiinadaha raadinta inay si sax ah u muujiyaan sawirradaada oo ay u muujiyaan qoraalka kale ee loogu talagalay akhristayaasha shaashadda iyo barnaamijyada xannibaya qoraalka (sida markii aad ku dhexjirto boggagaaga emaillada). Hantidhawrkaaga hubi oo ku buuxi qoraalka qoraalka beddelka ah oo leh erey-keyword-hodan ah, qoraal la xiriira.
Muuqaal kale oo weyn oo ka mid ah Buuqda Riyaha SEO Spider waa Liiska Habka. Waxaan ka qaadan karaa dhoofinta bogag tartan ah aalad sida Xeebaha, ku rid feyl qoraal ah, oo u soo geliso Raha Qaylo si aad u gurguurto oo aad u soo hesho gorfeyn ku saabsan dhammaan waxyaabaha ku jira boggaga darajooyinka tartamayaasha!
Haddii aad rabto inaad wax yar ka sii qodato hagaajinta mashiinka raadinta boggaaga, waxaan haynaa qodobadan:
Sida Loogu Tayeeyo Bog loogu talagalay Raadinta Maxalliga ah
Tags: gawaaridaguurguuraha boggarah qaylinayaayna search enginesemrushseo gurguurtoseo caaroqalabka seoguurguuraha webka
2013 Report soodhaha: Digital Suuq Muuqaalka
Faa’iidooyinka Is-dhexgalka Suuqgeynta Mobaylka
Tani waa qalab weyn. Si dhakhso leh, wax ku ool ah oo hadda haddii ay ku dhexjirto wordpress si aad wax uga beddeli karto iskuxirayaasha iyo madaxyada, iwm barnaamijkan. Taasi way fiicnaan laheyd inaan run noqon. Su'aashaydu guud ahaan waxay tahay hoos u dhigista menusyada ku jira wordpress sidan oo kale
Waad ku mahadsan tahay sheegista Douglas.
Sabab kasta oo aad ugu isticmaasho 'nofollow' dhammaan xiriiriyeyaasha dibedda ee goobta in kastoo?
Haa, maxaa yeelay waxaan ku leenahay xiriirinno badan oo dibadda ka baxa maqaal kasta.
Waan ka xumahay, ma hubo in taasi macno samaynayso.
Maxaad 'nofollow' u noqon laheyd wax aad ku kalsoon tahay oo aad qiimeyso?
Tani waa mid laga cabsan karo wixii “Image Alt Tags”… Mahadsanid Douglas!
Waad ku mahadsantahay dulmarka kooban ee Roobka Cabaada!
In kasta oo aan u adeegsado aalad kale la tacaalidda ku-habboonaynta bogga, waxay ahayd mid xiiso leh in la fiiriyo waxyaabo kale oo meesha yaal. Midka ka imanaya hubkaygu waa Hantidhawrka Websaydhka, waxaanan u adeegsadaa inaan ku helo nuqullada, khaladaadka koodhka iyo falanqaynta bogga bogga. Xaqiiqdii, aaladda bogga waa waajib in la helo, khaasatan hadda markay arrimo adeegsigu aad muhiim ugu noqdeen SEO.
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa Hantidhawrka Websaydhka, @emmettferguson: disqus. Qalab weyn - waxaan ku sameyn doonnaa qoraal sidoo kale.
Nov 6, 2013 at 3: 33 AM
Waxaan sidoo kale isticmaalayaa Hantidhawrka Websaydhka sidoo kale waxa aan ka jeclahay ayaa ah in taasi aysan ahayn wax qiimahoodu sarreeyo marka loo barbar dhigo Cawada Dhawaaqa ee 99 Pound sanadkii
Febraayo 6, 2015 saacadu markay tahay 11: 34 AM
Doolar kasta oo aad maal gashato Screensfrog sifiican ayaad ubixisay. Kaliya $ 100 waxaad halkaan ku heleysaa warbixinno aad u tiro badan iyo xogta aaladaha kale ayaa aad uga qaalisan oo qayb ahaan bishii ka mid ah.